ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ရေးမူကဗျာကို လေလံအောင်သွားတဲ့မိသားစုရဲ့လေလံဆွဲရခြင်းရည်ရွယ်ချက်နှင့်စိတ်နေသဘောထား – အနုပညာရပ်ဝန်း
လေလံပွဲအပြီး နောက်တနေ့မနက်မှာပဲ လေလံအောင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက ဖုန်းဆက်လာတယ်….
ကိုဗစ်ကာလမို့လို့ရယ်… သူ့ပင်ကိုယ်စိတ်ကိုကပွဲလမ်းသဘင်တွေကြိုက်နှစ်သက်သူမဟုတ်လို့ အိမ်မှာပဲအေးအေးနေတတ်တာရယ်ကြောင့် အိမ်ထဲကနေ အိမ်ပြင်တောင်မထွက်ဖြစ်တာ လတော်တော်ကြာနေပေမယ့် ကိုမောင်မောင်အေးအနေနဲ့ အစ်ကိုကြီး နဲ့ပွဲတွေမှာဆုံဖူးလို့ သိကျွမ်းဖူးကြပေတဲ့ ယခင်သိထားတာတွေထက်ပိုအတွင်းကျကျသိထားဖို့လိုအပ်မယ်ထင်လို့…အထူးသဖြင့် ကိုယ်တာဝန်ယူထားရတဲ့ လေလံပွဲမှာ လေလံအောင်သွားတဲ့သူဟာ သူ့လုပ်ငန်းတွေခိုင်မာမှုရှိရဲ့လားဆိုတဲ့ သံသယနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေရှိနေမှာစိုးလို့ အိမ်ခေါ်ဖိတ်တာပါ တဲ့… ပျော်ရွှင် ဂုဏ်ယူလေးစားစွာနဲ့ ဝမ်းပန်းတသာ သွားတွေ့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်….
ခြံထဲရောက်တော့ ချစ်စရာရေကူးကန်ဘေးနားက မြက်ခင်းပြင်ကြီးထဲမှာရော ကွန်ကရစ်အခင်းနေရာတွေမှာပါ ကားတွေအပြည့်နဲ့မို့ ကားတစီးစာနေရာထိုးဖို့ ကိုယ်တိုင် ပါကင်နေရာပြပေးတဲ့ ( ရိုးသားနှိမ့်ချမှုက သင်ယူစရာ ) လေလံအောင်သွားသူနဲ့ စကားတွေ တနာရီလောက်ပြောဖြစ်ခဲ့တယ်….( တကယ်တမ်းတော့ သူ့ရဲ့ စီးပွါးရေးအောင်မြင်စွာဖြတ်သန်းခဲ့မှုတွေကို ရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့စိတ်ရင်းအတိုင်း ပြောပြနေတာကို အခွန်းတိုင်းမှာ လေ့လာစရာတွေအပြည့်နဲ့ မှတ်သားခွင့် သင်ယူခွင့်ရခဲ့တာပါ )
ခေတ်အဆက်ဆက်စီးပွါးဥစ္စာကို အဖွားခေတ်ကတည်းက ဘယ်လိုတွေရှာဖွေခဲ့ရ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ် … ရှာထားသမျှ ပြည်သူပိုင်အသိမ်းခံလိုက်ရတာတွေက အစ… လက်ရှိအောင်မြင်နေတဲ့လုပ်ငန်းစုကြီးများစွာကိုတည်ထောင်နိုင်နေတာ အလယ်… မနေ့က လေလံပွဲမှာ မိသားစုအားလုံးဘယ်လိုပျော်ရွှင်ကြည်နူးခဲ့ကြရတယ်ဆိုတဲ့အထိ စိတ်ရင်းအတိုင်း ပြုံးရွှင်ပြီးတော့ကို ပြောပြနေခဲ့တာ…
“ ကိုယ့်အဖိုးအဖွားခေတ်ကတည်းက မွေးဖွားကြီးပြင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ဒီတိုင်းပြည်မှာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာတွေကို လုပ်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာ မလုပ်လိုက်ရပါလားဆိုတဲ့ နောင်တ မရချင်ဘူး “ တဲ့ ….
“ ကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်အစိုးရတွေမှာ ဘယ်အစိုးရက ပြည်သူတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်နေလဲဆိုတာရယ်… အဲ့ဒီလိုမျိုးအစိုးရကို နောက်ကွယ်ကနေ တတ်နိုင်သလောက်ပံ့ပိုးပေးရင်း နောက်မျိုးဆက်တွေအတွက် အခြေခံကောင်းလေးတွေ ရသွားရင်ကို ကျွန်တော် စိတ်ချမ်းသာပီတိဖြစ်ရမှာပါ “ တဲ့…
အိမ်မှာ ပန်းချီကားတွေထောင်ချီနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာပစ္စည်းတွေစုဆောင်းရတာကပဲ သူ့ရဲ့ဝါသနာ တဲ့…
ဒါပေတဲ့ ကလေးတွေက တယောက်မှ အဲ့တာတွေ စိတ်မဝင်စားလို့ သူတို့အတွက် ချန်ထားပေးဖို့တောင် အခက်တွေ့နေလို့ ပန်းချီပြပွဲတွေဖိတ်လို့ နောက်ထပ်ပန်းချီကားတွေမြင်ရင် ထပ်ဝယ်မိနေမှာစိုးလို့ စိတ်ကို မနည်းဘရိတ်အုပ်ထားရတယ်…
ထူးထူးဆန်းဆန်း အဲ့ဒီကဗျာကိုကျတော့မှ အမျိုးသမီးရော ကလေးတွေကပါ ( နိုင်ငံခြားမှာဘွဲ့အသီးသီးရပြီးပြန်လာကြသူတွေ ) အရမ်းကိုမြတ်မြတ်နိုးနိုးတန်ဖိုးထား လိုချင်နေခဲ့ကြသလို ဒီလေလံအလှူကနေ တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းတွေတထောင့်တနေရာအဖြစ်ပံ့ပိုးပေးနိုင်ကြမယ်ဆိုတာ သေသေချာချာကို နားလည်လက်ခံထားကြတာဗျ… တဲ့
“ မနေ့ညက ဟိုဧည့်ခန်းထဲမှာ မိသားစုအားလုံးစုပြီး လေလံကြေးတွေတိုးမြှင့်ပေးခဲ့ကြတာလေ “တဲ့…အားရကျေနပ်စွာ ပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ကိုပြောပြနေတော့တာ….
” ကျွန်တော်က အိမ်ထောင်ဦးစီးဆိုပေမယ့် အခုလို လေလံဆွဲဖို့ကိစ္စ ကအစ စျေးတိုးမြှင့်တိုင်း အိမ်သားတွေရဲ့သဘောတူညီမှုပါရယူတယ်… ဘယ်တော့မှ ကိုယ့်သဘောတခုတည်းနဲ့ မဆုံးဖြတ်ခဲ့ဘူး… နောက်ဆုံးလေလံအောင်သွားပြီလို့ ကြေညာလိုက်ချိန်မှာ သားသမီးတွေနဲ့ ဟေးကနဲ အော်ပြီးလက်ဝါးတွေရိုက်ဖြစ်ခဲ့ကြသေးတာ… ပြီးတော့မှ နောက်ထပ်ဖုန်းတကောထပ်ဝင်လာတော့ ခင်ဗျား ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတာ တော်တော်စိတ်ဝင်တစားစောင့်ကြည့်နေဖြစ်တယ်…. အခုလို ကိုယ့်စကားကိုယ်တည်ပြီး စည်းကမ်းအတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အပေါ်… ဒါ့ကြောင့် ဒီလေလံပွဲမှာ ပါဝင်ခဲ့ရကျိုးနပ်ခဲ့တာပေါ့ ” ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ ပြောပြတော့ ကိုယ့်မှာ ထိုင်နေတဲ့ခုံနဲ့ တင်ပါးကြားထဲ လေတွေတဝှီးဝှီး တဖြောင်းဖြောင်း ဖြတ်ပြေးနေသလိုတောင်ခံစားနေရရော….
သူပြောပြတာတွေ နားထောင်နေရင်း နာမည်ကျော်ကြားဖို့ဆိုတာ သူ့အတွက် အရေးမကြီး.. သူ့လက်ရှိအနေအထားနဲ့ လိုလည်း လုံးဝမလိုအပ်နေတော့တာကို မျက်ဝါးထင်ထင်အရှင်းသားကြီးတွေ့နေရတာ…
” ခင်ဗျား စဉ်းစားကြည့်ပေါ့… အခုလို တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်လိုအပ်မယ်ထင်လို့ လှူတာမှာ တခြားအခွင့်အရေးတွေပြန်လိုချင်မှတော့ နာမည်ဖော်ပြီးတောင်နေတော့မှာပေါ့… အခုက ဘယ်သူမှကို မသိစေချင်တာလေ ” တဲ့
အမျိုးသမီး နဲ့ သား သမီးတွေကအစ ကိုယ်နေတဲ့နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက် တထောင့်တနေရာ ပါဝင်ခွင့်ရနေတယ်လို့သာ စိတ်ထဲခံစားရင်းလေလံပွဲမှာ မိသားစုလိုက်ကို တပျော်တပါးကြီး ပါဝင်ခဲ့ကြတာ… တဲ့
ကျွန်တော့်လောက် မနက်နိုးတိုင်း ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ဘုရားရှိခိုး ဘုရားတရားတွေလုပ်ဖြစ်လို့ တရားရှိတယ်ထင်ရပေတဲ့ လေလံအောင်သွားတဲ့ညကတော့ ဘယ်လိုမှကို အိပ်မပျော်တာဗျာ တဲ့…
ဒီလေလံပွဲမှာ အနိုင်ရလို့ရယ်လည်းမဟုတ်ဘဲ ပွဲအပြီး ပို့စ်တွေ မန့်တွေမှာ ပြည်သူတွေဘယ်လောက်တောင် ပျော်နေကြ စိတ်ချမ်းသာ ကြည်နူးဝမ်းသာနေကြတာတွေကို လိုက်ဖတ်နေရင်းနဲ့ကို ပျော်နေတာ ပျော်နေတာဆိုတာ..
လေလံအပြိုင်ပေးခဲ့တဲ့သူရဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း လေးစားသလို သူနိုင်ခဲ့ရင်လည်း ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ဖူးပေမယ့် တဖက်ကလည်း အမေစု လက်ရေးကဗျာမူရင်းပါလား ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ မရ ရအောင်ကို သိမ်းထားချင်စိတ်က တားမရဘူး တဲ့…
အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ခင်ဗျား ဘေးကြပ်နံကြပ်ဖြစ်နေရလို့ ကျွန်တော့်နာမည်ဖော်ရတော့မယ်ဆိုလည်း ဘာမှပြဿနာတော့ မရှိပါဘူး… ဟိုးအရင်ကတည်းက အေးအေးဆေးဆေးနေချင်တဲ့သူမို့လို့ ဘယ်ကိစ္စမဆို တော်ယုံဘယ်အလှူမဆို လူရှေ့သိပ်ထွက်မပြဖြစ်တာဆိုတာရယ် ဒီအလှူငွေတွေ ဘယ်ကနေရတာလဲဆိုတဲ့ စိစစ်စရာတွေများပေါ်လာခဲ့ရင်လည်း အချိန်မရွေးငွေဖြူတွေ ပြပေးမယ်နော် တဲ့…
ကျွန်တော့်ရင်ထဲမှာ ပူလောက်မယ်ထင်တဲ့ သို့လော သို့လောတွေကို ကျောက်စက်ရေအေးလေးတွေနဲ့ တခွက်ချင်း တစက်ချင်း လောင်းချပေးနေတယ်လို့သာ ခံစားနေရတော့တယ်….
ဒီနေ့မှာတော့ ကဗျာပိုင်ရှင် ကဗျာဆရာ ဒါရိုက်တာ ကိုမင်းထင်ကိုကိုကြီး + လေလံအောင်တဲ့သူ + အလှူရန်ပုံငွေလက်ခံပေးသူ အဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအောင်နိုင်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ဦးဟံသာမြင့် ၊ ဦးသိန်းဦးတို့နဲ့ အတူ မင်္ဂလာရှိလွန်းတဲ့ အလှူတော်မင်္ဂလာ အောင်မြင် အထမြောက်ခဲ့လေပြီ…
လေလံအောင်သောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်နဲ့ ပုံတွေတင်လိုက်ပြီဖြစ်သလို သူ့ရဲ့ နာမည်ကျော်ကြားလိုမှုကင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒကြောင့် နာမည်တော့ မဖော်ပြတော့ပါ…
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အခုလို သမိုင်းတွင်မယ့်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ရပ်ကြီးတခုမှာ ပါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာ ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးရယ်..လေလံကြေးအများဆုံးရအောင် အဆင့်ဆင့် အပြိုင်လေလံပေးခဲ့ကြတဲ့ လေးစားကျေးဇူးတင်စရာ နေရာသီးသီးမှလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများရယ်.. လေလံအောင်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့ မိသားစု ရယ်… ကိုယ်တိုင်လေလံဝင်ဆွဲခဲ့ကြသလို အားရပါးရအားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူများတယောက်မကျန်ရယ်.. ဒီလေလံပွဲဖြစ်မြောက်အောင်မြင်အောင် အဖက်ဖက်က ဝိုင်းဝန်းကူညီပံ့ပိုးခဲ့ကြသူတယောက်မကျန်ကို ဒီပို့စ်နဲ့ တရိုတသေ ကျေးဇူးတင် ဦးညွတ်လိုက်ပါတယ်…
နေရာအသီးသီးမှ စိတ်စေတနာမှန်သူများနှင့်သာ ဘဝတလျှောက်ကြုံခွင့်ရပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလျက်
Source Mg Mg Ayecredit
အိမ်မှာ မစိုက်သင့်သည့် ဂမုန်း ( ၃ )မျိုး သထိထား ဆင်ခြင်နိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်